Iphupha malunga nomcuphi Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngubani ongacingi ngoSherlock Holmes omkhulu kunye neendlela zakhe ezingaqhelekanga zophando xa esiva igama elithi "umcuphi"? Okanye u-Miss Marple owaziwayo, onomdla wokubamba ababulali. Kodwa nokuba ungumcuphi onobuchule okanye umphandi ongahlawulwayo, into abafana ngayo bobabini kukufuna inyaniso. Uyabajonga abantu abanee-binoculars, iindlela ezikhuselekileyo ngoncedo lweglasi yokukhulisa, uthathe iifoto kunye neevidiyo, phantse njengempimpi.
Ngoku, kuthetha ukuthini kuwe xa uphupha umcuphi? Ngaba uyayikhangela inyaniso ngokwakho? Uthatha phi umfanekiso wephupha kwaye uyibona njani ingcaciso yephupha?
1 Uphawu lwephupha «umcuphi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Isimboli yephupha «umcuphi» - ukutolika kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «umcuphi» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «umcuphi» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, iphupha lihamba nomfuziselo wephupha "umcuphi" njengakwimeko yokuvuka ebomini i-verdad. Nangona kunjalo, ngokungafaniyo nehlabathi lokwenyani, inyaniso ifunwa kuwe hayi kwabanye.
Ukuba iphupha libona umcuphi kwiphupha lakho, kunokuba kunjalo amaxesha aqhwithela ukuza kuye. Kwakhona, uphawu lwephupha lubonisa uvumo oluya kulungisa uluvo lwakho ngomnye umntu kwi el mundo yomlindo.
Ukuba indoda enye ephuphayo ingumcuphi, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, ngokukhawuleza iba noxanduva. umsebenzi wasekhaya zigqithiselwe. Okanye umntu osengozini uyamthemba kwaye ufuna uncedo lwakhe.
Ukuba umcuphi uleqa iphupha lakhe ephupheni, oku kunokuchazwa ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo ekutolikeni iphupha. Iphupha liyatshutshiswa kwaye linetyala, ke uphawu lwephupha lubonakalisa kwaye alunakuba nesazela esicocekileyo nakwilizwe elivukayo. umnxeba kusengozini. Abahlobo banokukufulathela.
Ukulandela ngokungekho ngqiqweni ngumcuphi, umzekelo ukuba umntu obonwayo umsulwa ngokupheleleyo, kubonisa njengephupha ukuba umntu ophuphayo uza kuba Uzuko ndiza kuza. Kuyenzeka ukuba ufumane izibonelelo zoqoqosho; Ngale nto, nangona kunjalo, umntu makakuthathele ingqalelo ukutolikwa kwazo zonke iisimboli ezivele ephupheni.
Isimboli yephupha «umcuphi» - ukutolika kwengqondo
Kutoliko lwengqondo lwamaphupha, "umcuphi" isimboli yamaphupha ikhokelela kwi iingozi okanye iindlela ezijikayo eziphambi kwamehlo akho, ezinokulinda iphupha xa uqhubela phambili kumandla amatsha angenamda.
Ukuba uphawu lwephupha "umcuphi" litolikwa njengendoda eleqa iphupha kwaye ibona ngeengcinga zayo ezifihlakeleyo, iyabamela. YintlunguVumela iinjongo ezimbi zityhile kwaye zibuyele emaphupheni ngokwawo. Rhoqo into ebangela oku kukwazi ulwazi ngobutyala, kunye neemvakalelo zokuziva unetyala.
Ukuba umntu ophuphayo uzibona ephupheni njengomcuphi, ngokokuchazwa kwengqondo ephupheni, unokufuna ngokungenanceba ukufumanisa into aze ayisebenzisele iinjongo zakhe. Umntu ophuphayo "uMcuphi" ukwabonisa ukuba Intsingiselo, ebuza amaphupha ukuba ayeke ekugqibeleni ngezi mfihlo.
Uphawu lwephupha «umcuphi» - ukutolika kokomoya
Ngophawu lwephupha «umcuphi», iphupha liya ekutolikweni kwephupha lokomoya kuye fumana ngokwenyani.